Akumangazi-ke ukuthi umphakathi wanamuhla, inzalo hormone indlela ethandwa lokuvikela kuyinto engathandeki kakhulu ekukhulelweni okungahleliwe. Omunye abameleli ovelele kuleli qembu kwemithi buyisidakamizwa "regulon" side effects aziwa inkampani Hungarian ezithaka imithi - nomkhiqizi "Gédéon Richter" iye kuyehla kube sezingeni eliphansi.
Chaza lo mshini wezenzo we umuthi emzimbeni yabesifazane. Okokuqala, kubalulekile ukuba sicacise ukuthi yakhiwa ezimbili ezifana zokwenziwa i-hormone desogestrel futhi ethinyl estradiol. Okubakhona "ukuphepha" yenqubo itholakala okusithiyayo amahomoni pituitary ngenxa ngokweqile kwama-hormone zesifazane. Njani ukwenza lokhu? Ngezinye ukuntula hormone ocansini zazikhiqiza izinhlobo eziningi omkhulu hormone pituitary okuyinto yena, kukhuthaza ukukhiqizwa kwe-hormone ocansini owesifazane, futhi, ngokweqile ukukhiqizwa efana hormone pituitary ngokuphawulekayo engasenamahloni. Njengoba sazi lokhu iphethini, ungasho ngokuphepha ukuthi regulon ikhuthaza entry sithuthukiswe ku emzimbeni owesifazane ocansini hormone, lapho inani lama-hormone pituitary ukufukula ukukhiqizwa yabo, is kakhulu ziyancipha.
Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile kakhulu ebekiwe ukwenza umuthi Isidakamizwa "regulon" ohlangothini-imiphumela avamise obuzwiwa umzimba female. Ikakhulukazi, kutuswa kujwayeleke nomjikelezo wokuya esikhathini, phambi kwezikhathi ezithile lesizalo ukopha, kanye imakwe syndrome -menstrual futhi dysmenorrhoea. Nokho, kulesi simo, umuntu akufanele ukhohlwe le ndlela yokwelapha kumele yabelwe uchwepheshe kuphela ehamba phambili, ngaphezu, emitholampilo uma akhethiwe Isikali ekwakhiweni "regulon" ngamunye, ogama side effects zisho engathandeki isiguli.
Lesi sidakamizwa hormone iyasiza inzalo, ngoba ibhamuza ngamunye 21 kunesithembiso ephilisini, omunye iphakethe iqukethe eziningi njengoba ezintathu we ibhamuza. Ukuze uthuthukise ukuthembeka isikhala kwithebhulethi ngalinye olunezinombolo, umcibisholo ikhombisa isiqondiso, + ukuze kuthi lapho ethola lokudlela into engenakwenzeka.
Nokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi iqukethe iziqondiso eziningiliziwe mayelana nokuthi isicelo imikhawulo kanye nemibiko yonke imiphumela engemihle engase ibe ukuthi kungenzeka ngesikhatsi ukwelashwa nge izidakamizwa "regulon". Imiphumela engemihle kuyaqabukela zenzeka, kodwa, ngeshwa, lezi futhi sinendawo zokwelapha zanamuhla. Khansela zokuvimbela inzalo ngomlomo noma cha, kuxhomeke ngokuphelele imininingwane nemvelo izigigaba ezingezinhle.
Ngakho, abesifazane kungayandisa kakhulu ingcindezi kanye ngangokunokwenzeka isilethikusebenza, thromboembolism, unhlangothi, ukuvaleka imithambo ezijulile wemikhawulo aphansi. Futhi, isivikelo esinjalo kungase kakhulu kuthinte isibindi, ingqondo neziqubu isifo gallstone kanye jaundice isihluku. Kulezi izithombe zokwelapha kudingeka ngokushesha ayeke ukuthatha futhi uthintane onguchwepheshe ukuba esikhundleni zokuvimbela inzalo noma Ukukhetha lomunye, kahle imithi iqembu kwemithi.
Kodwa lapha ukuze ukukhansela reception regulon akudingekile uma kwenzeka opha intermenstrual, ushintsho ubunjalo isikhwehlela lwesitho sangasese sowesifazane, ubuhlungu uzizwa wamabele ukukhulisa. Futhi, ningatatazeli ngokungafanele ephula isimiso sokugaya ukudla bungene zokukhukhumala, iziyaluyalu sezinzwa futhi izinguquko isisindo emzimbeni. izimpawu ezinjalo kuyagcinwa kuphela ekuqaleni yokwamukela amaphilisi "regulon" side effects iyanyamalala ngemuva lithathelwe umzimba.
Ngesikhathi ngesinqumo ukuhlela umndeni kanye nokucabanga ingane , futhi, ungakhathazeki, ngoba ukukhulelwa ngemuva regulon, noma kunalokho ngemva yokukhansela yayo, kuyofika ngesikhathi esifanele. Noma kunjalo, lesi sidakamizwa ewuthanda udumo esiphawulekayo lapho ephakathi kwabesifazane yesimanje kakhulu imikhakha eyehlukene.
Antispasmodic: amakhandlela ne papaverine. Umyalelo, ukufundwa, ukubuyekezwa
I pyrolytic yokuhlanza kuhhavini - enye yezindlela ambalwa ukuhlanza